Laba Gabdhood Oo Walaalo Ah Oo Si Ay Isugu Ekeedaan Ku Bixiyey Kharash Boqolaal Kun Oo Dollar Ah – Tusmoonline.com
Laba Gabdhood Oo Walaalo Ah Oo Si Ay Isugu Ekeedaan Ku Bixiyey Kharash Boqolaal Kun Oo Dollar Ah
Arrimaha Bulshada Dhacdooyinka Wararka	December 22, 2016	156	Like
Laba hablood oo walaalo ah ayaa si ay isugu ekaadaan muuqaal ahaa waxa ay ku bixiyeen lacag qaddarkeedu ka badan yahay 250-kun oo dollar si loogu sameeyo qalliino dhinaca jidhka ah oo muuqaalkooda la isu ekaysiiyo iyaga oo aan markii hore u dhalan muuqaal ahaan kuwo isku eg balse si ay isugu ekaadaan lacagtaasi buuran ku kharash gareeyey. Labadan mataano ah ayaa isku ekaanshahooda ku bixiyay dhaqaale aad u xoog badan, kadib markii ay sheegen inay wadaagan wax walba oo noloshooda ku saabsan.
Gabdhahan ayaa la sheegay in ay leeyihiin damac la sheegay in uu aad u layaab badan yahay oo ay ku riyoonayaan in ay xaqiijiyaan taasi oo ah in ay helaan hal nin ay saaxiib la wada noqdaan, Hal mar oo ay u wada qaadaan ninkaasi uur, haddii ay isku qancaana ay wada guursadaan hal nin, waxaanay juhdi badan ku bixinayaan inay wada yeeshaan hal uur isku wakhtina wada dhalaan, aduu wax kasta oo noloshooda ku saabsan in ay hal mar wada sameeyaan. Gabdhahani ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Lucy DeCinque iyo Anna oo da’ dooda lagu qiyaasay 35 jir. Lucy DeCinque iyo Anna ayaa qurxintooda ku bixiyay dhaqaale dhan $ 250,000, waxaana lagu sameeyay qaliin dhanka jidhka ah si aanay isku khilaafin muuqaalkoodu ama u noqdaan kuwo aad isugu eeg. Anna iyo Lucy DeCinque ayaa dareenkooda wuxuu yahay mid isku xidhan, oo mid walba waxay sameyso ay tan kalena sameyneyso, hadday wax cunto Anna, Lucy iyadana waa qasab in ay wax cunto.
Labadan haween ah ee walaalaha ah oo mataano ah ayaa waxa ay tan iyo maalintii ay dhasheen ka siman yihiin dhinaca dareenka oo ay isaga mid yihiin iyaga oo wadaaga astaamo aad u mucjiso badan sida tusaale ahaan haddii midi xanuunsato in ay ta kalena xanuusato, haddii midi ay u baahato cabitaan iyo cunto ay ta kalena u baahato intaa in la mid ah xataa ay ka siman yihiin wakhtiyada ay xaajo gudanayaan ee ay suuliga u baahdaan iyo baahiyo kale oo ay isaga mid yihiin mar kasta dareen ahaan.